Rohingya Students Forum: Gandhi: A Over Smart Pupil
မြန်မာပြန် ✈ Koung Loon|
ရိုပြန် ✈ Fáida Halu|
အင်္ဂလိပ်တင် ✈ Khant Naing|
အိန္ဒိယရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီ အင်္ဂလန်မှာ ဥပဒေပညာ သင်ယူနေတုန်းက သူနဲ့ မတည့်တဲ့ ပါမောက္ခတစ်ယောက်ရှိခဲ့လေ၏။ ပါမောက္ခနာမည်ကို မစ္စတာ ပီတာပဲ ထားလိုက်ပါတော့…။
[Indíyar Azaadir Soddár Mahatma Gandhí zehón Vilad ot Ukilati forédde ottót tañir loi no boin to de Porfésar uggúa accíl. Tañir nam Mr. Piter accíl.]
အဲဒီပါမောက္ခဟာ ဂန္ဒီကို ကြည့်မရသူပီပီ တနည်းနည်းနဲ့ ချိုးနှိမ်ဖို့ အမြဲကြိုးစားနေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လေ သည်။ ဒါပေမယ့် ဂန္ဒီက ဥာဏ်ရည်ထက်မြတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လေတော့ ပါမောက္ခပီတာ ချိုးနှိမ်လို့ မရအောင် ဖြစ်ခဲ့ရလေ၏။
[É PorfésareGandhí ré diyái nofaré dé étolla fotti ham ot íbaré niróc gorí bólla kucíc goitto. Kintu Pitareíba ré cóñro banai no faré.]
တနေ့မှာတော့ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ထမင်းစားခန်းထဲ၌ ပါမောက္ခ ပီတာ နေ့လည်စာစားနေတုန်း ဂန္ဒီရောက်လာ ခဲ့၏။ပြီးတော့ ဂန္ဒီက သူ့ရဲ့ ထမင်းပန်းကန်ကို သယ်လာပြီး ပါမောက္ခ ပီတာရဲ့ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်၏။
[Ek din kolej ór bát hádé hol ót Pitar bát har dé ottót Gandhí góille gái. Toí Gandhí yé tar bát ór soun loi Pitar dáke ai boiccé gái.]
ထိုအခါ ပါမောက္ခ ပီတာက ဂန္ဒီကို “မစ္စတာဂန္ဒီ.. ငှက်တစ်ကောင်ဟာ ဝက်တစ်ကောင်နဲ့ နေ့လည်စာ အတူစားလေ့မရှိဘူးဗျ” လို့ ချိုးနှိမ်စွာပြောလိုက်ပါလေတော့၏…။
[É ottót Pitare“ O Gandhí, Faik uggúa yé cuor uggúa loí háná fúñáti no há” hoí ínca góri hoiyé.]
ထိုအခါ ဂန္ဒီက တုန့်ဆိုင်းမနေပဲ..ပါမောက္ခရဲ့ စကားကို ဤသို့တုန့်ပြန်လိုက်ပါ၏။
[Éottót Gandhí yé deri nogorí Pitar hotá ré een juwab diyé.]
“သြော် .. ဟုတ်ကဲ့ ပါမောက္ခ ပီတာ ကျွန်တော် ပျံသန်းသွားပါတော့မယ်ခင်ဗျား” လို့ခပ်အေးအေးလေသံနဲ့ ပြန်လည်ချေပကာ နောက်စားပွဲသို့ပြောင်းရွေ့သွားပါတော့၏။
[“Au...sóyi hoiyó Pitar sáf, aññí uri zaiyum moí zé” hoí tánda abasejuwab di ar ekkán mes ót zai boiccé gói.]
ဂန္ဓီ၏ ချေပစကားကြောင့် ဆတ်ဆတ်ခါနာသွားတဲ့ ပါမောက္ခ ပီတာ က "နေနှင့်ဦးပေါ့ ဂန္ဒီရာ.." ဟုအငြိုးထားခဲ့ပုံရ၏။
[Gandhir juwab loi Pitar ammúk oí “Ták…ták… boisana, Gandhi” hoi rag rakí diyé.]
စာသင်ခန်းထဲမှာ ပါမောက္ခ ပီတာက ဂန္ဒီကို မေးခွန်း တစ်ခု မေးပါတော့၏။
[Ek din, kalas ót mazé PitareGandhí ré suwal ekkán fusár goijjé.]
“မစ္စတာဂန္ဒီ.. လမ်းသွားရင်းနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ အထုပ်နှစ်ထုပ် ကျနေတာကိုတွေ့တယ်..။ တစ်ထုပ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံတွေပါပြီး.. နောက်တစ်ထုပ်ထဲမှာ ဗဟုသုတ အသိပညာတွေပါတယ်..။ ခင်ဗျား တစ်ခုပဲ ယူရမယ် ဆိုရင် ဘယ်အထုပ်ကို ယူမလဲ”
[O Gandhí, rastat tú añri zaite gaththí duwa fori taikké dé dikkí. Gatthí uggúat tiyañ asé ar uggúat Elóm asé. Tuáñr tú honó uggúa luwa forer de óile tuiñ honnúa loi bá?]
ထုံးစံအတိုင်းပဲ အေးဆေးစွာဖြင့်ဂန္ဒီက “ပိုက်ဆံပါတဲ့ အထုပ်ကို ယူမှာပေါ့ ဗျ” ဟု မဆိုင်းမတွ ပြန်ဖြေ လိုက်၏။
[Ode ode nizam ór sáñte “Thiyáñ asé dé íba loiyum éri”, hoí juwab diyé.]
ထိုအခါ ပါမောက္ခက စဉ်းလဲစွာပြုံးလိုက်ပြီး ခနဲ့တဲ့တဲ့လေသံဖြင့်…“ ကျွန်တော်သာ ခင်ဗျားနေရာမှာ ဆိုရင်တော့ ဗဟုသုတ အသိပညာတွေပါတဲ့ အထုပ်ကိုပဲယူမယ်”
[Éottót Pitaremug gali háñci oré boráiyá abase “ossé mui tor zagat óitam bóli Elóm asé dé gaththí wá loitam.]
ပါမောက္ခစကားဆုံးသည်နှင့် ဂန္ဓီက…"ဟုတ်ပါတယ်..။ လူတွေဟာ သူတို့မှာ မရှိတာကိုပဲ ယူတတ်ကြ တာလေ"
[Pitar or hotá fúrai mottón Gandhí yé “Oi zé, Manúic ókkoletaráttú náidé iín oré lode”.]
ပါမောက္ခပီတာဟာ ဂန္ဒီကို ဘယ်လို လက်စားချေရမလဲ ပဲ အကွက်စောင့်ချောင်းနေပါတော့၏…။ စာသင်ခန်းထဲမှာလဲ မနိုင်.။ စာမေးပွဲစစ်တော့လဲ ဂန္ဒီက အားလုံးဖြေနိုင်..။
Porfésár PitareGandhíttún hondilla gorí bodola loiyum soñi accíl. Kalas óttó ziti no faré, zehón entaan accé, Gandhí yé bála gorí di faijjé. ]
နောက်ဆုံးတော့ ပါမောက္ခဟာ မကြေမချမ်းနဲ့ ဂန္ဒီရဲ့ အဖြေလွှာပေါ်မှာ" Idiot " ဆိုပြီး ပါမောက္ခက ရေးလွှတ်လိုက်ပါတော့၏…။
[Akhérittú Pitarerake gandhír parcár uore “Idiot” hoí lekí di forfésarewafes Gandhir háñsé sek golti sóyi saibollá diferáiyé. ]
အဲဒီ အဖြေလွှာ ဂန္ဒီ့လက်ထဲ ပြန်ရောက်တော့ ပြောမပြနိုင်လောက်အောင်ကို ဒေါသထွက်ခဲ့ရ၏…။ ဒါပေမယ့် ဂန္ဒီပဲလေ. ခေသူမှ မဟုတ်တာ..။ သူ့ကိုသူ တည်ငြိမ်သွားအောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီး ပါမောက္ခပီတာ ရှိရာကို ထသွားလိုက်လေ၏…။
[É pareca gán zehón Gandhí yé faiyé soñlí no faré fán guiccá uiththé. Kintu te guiccá ré sóñlí Pitar asédé zagat urí giyé.]
ပါမောက္ခ ပီတာ ရှေ့တည့်တည့် ရောက်တော့မှ ..
“ပါမောက္ခကြီး .. ကျွန်တော့်စာရွက်ပေါ်မှာ ခင်ဗျားနာမည်ကိုတော့ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့် အဆင့်ဘယ်လောက်ဆိုတာ သတ်မှတ်မပေးလိုက်ဘူး ဗျ”
[Pitar muúntú foñsí, Porfésar saab, habos or uore tuáñr dostok de diyó, kintu,
Lombor hoduún dé lekí nodila.]
ဂန္ဓီ၏ ဥာဏ်ပြေးသောတုန့်ပြန်မှုစကားကြောင့် ပါမောက္ခ ပီတာရဲ့ ဖြူဆွတ်ဆွတ် မျက်နှာဟာ နီမြန်းသွားခဲ့ရ ပါတော့လေသတည်း…။
[Gandhír salu juwabePitar dola muk laal oí giyói.]
Mr. Peters, by this time was fit to be tied. So great was his anger that he wrote on Gandhi's exam sheet the word "idiot" and gave it to Gandhi... Gandhi took the exam sheet and sat down at his desk, trying very hard to remain calm while he contemplated his next move.
Labels: jokes, Rohingyalish, သုတ